यसरी सेलिब्रेटी भईन् भद्रगोलकी रक्षा, सुन्दरताको यस्तो तारिफ - samayapost.com
यसरी सेलिब्रेटी भईन् भद्रगोलकी रक्षा, सुन्दरताको यस्तो तारिफ
समयपोष्ट २०७६ जेठ २८ गते १३:०७
सिन्धुपाल्चोककी चर्चित कलाकार रक्षा श्रेष्ठको क्रेज निक्कै बढेको छ । विज्ञापनबाट करिअर सुरु गरेकी रक्षा चर्चित सिरियल भद्रगोलको चर्चित पात्रमा मात्र सिमित बनिन् । अभिनेत्रीको रुपमा समेत परिचय बदलि सकेकी छिन् । रक्षा श्रेष्ठ विभिन्न विज्ञापनमा निकै सक्रिय हुन्छिन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा ‘भद्रगोल’ हास्य सिरियलबाट चर्चित बनेसँगै अभिनेत्री श्रेष्ठ केही सिनेमामा समेत देखापरिसकेकी छन्। उनको सुन्दरतासँगै अभिनयको पनि उत्तिकै तारिफ हुने गरेको छ।
उनले अहिलेसम्म सयको हाराहारीमा विज्ञापनमा अभियन गरिसकेकी छन्। भद्रगोलको रक्षा भनेर चर्चित रक्षा आफूलाई यही सिरियलले चिनाएको स्वीकार गर्छिन्। सयकै हाराहारीमा म्युजिक भिडियोमा खेलेकी रक्षा अब नेपालकी अग्रपंक्तिकी कलाकार हुन् ।
उनको बाल्यकाल सिन्धुपाल्चोकमा दाजुभाइकाबीच बितेको थियो। यसैकारण उनी केटाजस्तै कुनै सिंगारपटार नगरिकन हिँड्ने गर्थिन्। केटासँगै फुटबल, भलिबल खेलेर हिँड्ने गरेकी रक्षा जब विज्ञापनमा खेल्ने भइन् तब जीवनमा पहिलोपटक सिंगारिँदै थिइन्। त्यसबेला उनले चर्चित फोटोग्राफर राजभाइ सुवालसँग फोटोसुट गराएकी थिइन्।
उनी त्यो क्षणलाई सम्झँदै भन्छिन्,‘ मैले जीवनमा आफूलाई पहिलोपटक त्यति राम्री भएको देखें। त्यस अघि त केटा मान्छेजस्तै हो। दाजु भाइहरूसँग हिंड्ने म कस्तो थिएँ होला त ? मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै छ के ? भद्रगोलको टिममा पनि मलाई भाइ भनेर बोलाउँछन्। उनले भनिन् ।
उनी सम्झिन्छिन्, ‘जब मलाई जीवनमा पहिलोपटक त्यसरी सिंगारियो तब म त ऐना हेरेको हेर्‍यै गर्न थालें। पछि फोटो घरमा लगेर बाबामामु सबैलाई देखाएँ। उहाँहरूले पनि कति राम्री भनेर प्रशंसा गर्नुभो।
त्यसपछि पनि मैले त्यो फोटो लुकेर धेरैपटक हेरें। फेरि अरूले देखे भने कति फोटो हेरेको भनेर जिस्क्याउलान् भनेर लुकीलुकी हेर्थें।’ उनले यसैगरी खुलेर कुरा गर्छिन् ।